ညဘက်မှာရေချိုးရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ???? - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ညဘက်မှာရေချိုးရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ????
ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအပန်းပြေသွားအောင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေကုန် အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ညနေဖက်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပန်းပြေသွားအောင် ရေချိုးပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးစမှာ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျယ်နေတဲ့အတွက် ချက်ခြင်းရေတန်းမချိုးပါနဲ့။ မိနစ် ၃၀ခန့် ဆောင့်ပြီး ကိုယ်အပူချိန်လျှော့ကျသွားကာ ချွေးပေါက်တွေပြန်ကျဉ်းသွားတဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်မှာ ရေချိုးပါ။ ညဖက် အတော်နောက်ကျရင်တော့ ရေနွေးနဲ့ချိုးပါ။
ရေနွေးနဲ့ မချိုးခင်မှာ ရေအပူချိန်ကို လက်နဲ့ထိတွေ့ ခံစားကြည့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထက် ၅ ဒီကရီပို၍ လက်ခံနိုင်သည်။ လူတယောက်၏ သာမန်အပူချိန်ကတောပ ၉၇ံ ဖါရင်ဟိုက်၊ ၃၆ံဆာဆီယပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်လက်ခံနိုင်တဲ့ မပူလွန်း မအေးလွန်း အနေအထားကို ရယူပေးတာကောင်းပါတယ်။
ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်နဲ့စိတ်ကို သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည် လန်းဆန်းတက်ကြွအောင် ပြုလုပ်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် ရေချိုးခြင်းကို အချိန်အဆမှန်မှန်နဲ့ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Health By Doctors